Xirfadlaha Shiinaha ayaa lumay soo saaraha kaxaynta xumbo-samaynta qalabka 022 Manufacture1 iyo Factory | Mashiinnada Yingyi
Xirfadle luntay xumbo tuurista -Sylinder...
Xirfadle luntay xumbo tuurista xumbo-sameeyaha qalabka Silinder 022
Matrix qaab dhismeedka：Ferrite
CodsigaQalabka Silinder, Qalabka baabuurta, Qalabka tareenka, Qalabka waalka, tuurista markabka, Ilkaha baaldiga qodista, taageerada usheeda dhexe wareegta
Heerka spheroidization: Ka sarreeya fasalka 3, oo uu ku jiro fasalka 3
Hababka tijaabada: 1. Qaybaha lagu falanqeeyay spectrometer; 2. Tijaabi ka hor iyo ka dib foornada; 3. Falanqeeyaha wajiga wanaagsan, hubi in heerka spheroidization, pearlite iyo ferrite ay u qalmaan, oo hubi inay jiraan karbide; 4. Tijaabada adag ee mashiinka adag; 5. Mashiinka kacsanaanta, cabbiraadda xoogga xajinta, dhererka, sifooyinka farsamada, iwm.
Shirkadeena inta badan waxay ku hawlan tahay qaybaha mishiinada, Alaabooyinka Hardware, Aluminium Die-casting. zinc die-casting iyo qaybo kale oo bir ah, Qaybaha shaambada, Qaybaha been-abuurka ah, Qaybaha Auto, Qaybaha tareenka, Qaybaha Valve. Waxaan leenahay warshad noo gaar ah Ningbo tianxiang shubista saxda ah Co., LTD. Waxaan leenahay 15 sano oo waayo-aragnimo ah. Waa tii labaad ee aan midna ka helin aasaaska xumbo tuurista ee Ease of China. Shirkaddayada gobolka iyo warshadaha waxay ku kasbatay kalsooni iyo ammaan baahsan. Warshadu waxa ay u heellan tahay in ay soo saarto xajmi yar iyo mid dhexdhexaad ah oo ka samaysan biro xumbo luntay.
Tirada caadiga ah ee qalabyada dhululubada:
Dhululubada caadiga ah waa mid ka mid ah dhululubada aadka loo isticmaalo. Inta badan la isticmaalo waa Airteck SC cylinder, SI cylinder, SU cylinder; DNC Festo FESTO cylinder, nooca SMC ee MBB cylinder, iwm.
Tilmaamaha ugu muhiimsan iyo faa'iidooyinka dhululubada caadiga ah,
1. Dhexroor dhululubo waxaa loo qaybiyaa 32 ~ 320mm, iyo stroke dhululubo gaari karaa 2000mm.
2. Daboolka hore iyo kan dambe ee dhululubada waxay leeyihiin hawlo hagaajin ah, si piston dhululubada uu si habsami leh ugu socdo labada daraf iyada oo aan la dareemin wax saameyn ah.
3. Qalabyada rakibaadda dhululubada kala duwan ayaa la heli karaa, dabacsanaan iyo isbedeli karo.
Hore: Soo saaraha tuurista xumbo-yaqaanka ah ee lumay - Qalabka Silinder 021
Xiga: Xirfadle luntay xumbo tuurista soo saaraha-Alaabada Silinder 023
Aluminium Alloy tuurista
Qaybaha Auto Rocker Arm
Xakamaynta jilitaanka Zinc Die
Xirfadlaha lumay xumbo tuurista -Cyl...
Alaabooyinka Kulul, Khariidadda goobta